Xaalada Magaalada Beladweyne oo kacsan kadib markii shalay dil uu ka shacay – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Beladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, waxaa xaalad kacsanaan ah saaka ay ka taagan tahay Magaaladaasi, kadib markii shalay galab Magaalada Beladweyne lagu dilay Sarkaalkii Hay’adda Miino Baarista (Main Action) u qaabilsanaa Gobolka Hiiraan.
Dilka Sarkaalkaan ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya, xilli sarkaalka gaari uu watay oo maraayay Xaafada Xaawo Taako rasaas ay ku fureen ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin Dowladda.
Sarkaalka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Mahdi Xuseen Shiikhaal taasoo madax ka ahaa faraca hay’adda United Nation Mine Action Service ee magaceeda loo soo gaabiyo (UNMAS) ee magaalada Beledweyne.
Wararka saaka Beladweyne aan ka helayno, ayaa sheegaya in ciidamo ka cadheysan dilka Sarkaalkaasi oo qaab beeleed isku soo abaabulay ay saaka xirteen Xaafado ka mid ah Magaalada Beladweyne.
Waxaa muuqata jawiga Magaalada in uu kacsan yahay oo xaafadaha qaar ay xirteen maleeshiyaadka hubaysan ay la taagan yihiin qoryo iyo gaadiid dagaal, iyadoo ay muuqato inay u diyaarsan yihiin dagaal.
Maamulka Magaalada Beladweyne iyo kan Gobolka Hiiraan intuba kama aysan hadlin sababta ka dambeysay dilka Sarkaalkaasi, lamana oga halka ay u baxsadeen ciidamadii dilay Sarkaalka.